OS X တွင်ကမ်းခြေဘောလုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမည်သို့တွန်းလှန်ရမည်နည်း ငါက Mac ကပါ
Pedro Rodas | | NOTICIAS, OS X ကိုအယ်လ် Capitan
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာငါက update လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် MacBook ၁၃.၃ လက်မ MacBook Pro Retina နဲ့ ၁၁ လက်မအရွယ် Air I ရှိခဲ့တယ်။ အဆိုပါဗေဒပြောင်းလဲမှုထွက်ခုန်သောကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးအရာဖြစ်၏ ခိုင်ခံ့သော MacBook Pro ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သောပရိုဖိုင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းရန် MacBook Air ၏အဆင်တန်ဆာပုံသဏ္toာန်ပျောက်ဆုံးသွားသည်.
အလေးချိန်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းနှင့် Pro Retina ၏စွမ်းဆောင်ရည်တို့ကြောင့်၎င်းသည် Air ထက်အနည်းငယ်ပိုလေးသည်။ သို့သော် Pro သို့ခြေလှမ်းမတက်မီခံယူရန်ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အရာဖြစ်သည်။ ငါအရမ်းပျော်တယ်၊ 8 GB RAM နှင့်အတူ 256 GB SSD နှင့်၎င်း၏ 2,7 GHz ပရိုဆက်ဆာကမြင်းစီးသူရဲမြင်းတစ်ကောင်ဖြစ်စေသည်။
သင်တပ်ဆင်ထားသော operating system မှာ OS X El Capitan ဖြစ်ပြီးဒီနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တစ်ကြိမ်ထက်မကကြုံတွေ့ခဲ့ရသောပြproblemနာသည်ဤနေရာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် ၁၁ လက်မ MacBook Air ကို ၂ နှစ်ကျော်နေခဲ့တုန်းကနာမည်ကြီးသဲသောင်ပြင်ဘောလုံး၊ ကွန်ပျူတာဒါမှမဟုတ်ကပ်နေတဲ့အခါပေါ်လာတဲ့ရောင်စုံမြို့ပတ်ရထားအိုင်ကွန်ကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တုန်းကအကြိမ်အနည်းငယ်ပဲ ဒါမှမဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်တခုခုလုပ်ဖို့သင့်ကိုအချိန်ပေးတယ်။
တကယ်တော့ဒီအစွမ်းထက်တဲ့လက်တော့ပ်သက်တမ်းတလျှောက်မှာကမ်းခြေလုံးလေးဟာအကောင့်ထက်ပိုပြီးထွက်လာတယ်။ အက်ပဲလ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖိုရမ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့ OS X မှာအသေးစိတ်လေ့လာဖို့လိုတဲ့အသေးစားအသေးစိတ်ပြproblemနာတစ်ခုဆိုတာငါသိတယ်။ အနာဂတ်ဗားရှင်းအတွက်အယ်လ် Capitan ။ အခုဆိုရင် system ကကမ်းခြေဘောလုံးနဲ့တွဲနေတဲ့အခါ၊ စိတ်ထဲပထမဆုံးသတိရတာက power ခလုတ်နဲ့ကွန်ပျူတာကိုပိတ်လိုက်တာပါပဲ။ အကယ်၍ သင်စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ပါကသင်၏စက်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ငါအစွန်းရောက်ရောက်ရှိဖို့ရှောင်ရှားရန်ဘာလုပ်ရမှန်းများအတွက်ကွန်ယက်ကိုရှာဖွေဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ဖြေရှင်းချက်ကတော့ Finder ကို restart လုပ်ဖို့ပါ။ ဒီအတွက် Apple ကမီနူးမှာရွေးစရာကိုစီစဉ်ပေးတယ် အင်အားလျှော့ အားလုံးကောင်းသွားလျှင် Finder မီနူးမှဤရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရယူနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုသင်လုပ်နိုင်သည့်အချိန်တိုင်းမဟုတ်ပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကမ်းခြေလုံးလေးသည်သင့်ကိုရွေးချယ်ခွင့်မပြုပါ။
ထိုကိစ္စရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားအရာတစ်ခုကိုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သော့ချက်ဖြစ်သည် အားလုံး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် OS X အထိုင်ရှိ Finder အိုင်ကွန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကလစ်နှိပ်ပါ။ အကယ်၍ သင် alt alt ကိုမနှိပ်ပါကတည်ရှိနေသည့် pop-up ၀ င်းဒိုးတွင်ရွေးစရာအသစ်များပေါ်လာသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသင့်သော option ဖြစ်သည် Force restart လုပ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » OS X El Capitan တွင်ကမ်းခြေဘောလုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမည်သို့တိုက်ဖျက်နိုင်မည်နည်း
Ruben Flores ဟုသူကပြောသည်
လေများ !! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Rubén Flores ကိုပြန်ကြားပါ
Jaime Aranguren ဟုသူကပြောသည်
ရှာဖွေသူကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းလော။ လိုက်တယ်, လိုက်တယ်, လိုက်တယ် ...
Jaime Aranguren အားစာပြန်ပါ
Audiobooks များနှင့်လက်ဝါးကြီးအုပ်ရန်ဂျာမနီက Apple နှင့် Amazon ကိုစုံစမ်းခဲ့သည်